【 ဆောင်းပါး 】“ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ” | Opinion Leaders
အောင်မြင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာ သင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာ မှန်ကန်သင့်မြတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာ များစွာမူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ (သို့တည်းမဟုတ်) လာလတ္တံ့သော ပြဿနာတွေကို သေချာမသိဘူး။ နားမလည်ဘူး။ မမြင်တတ်ဘူး။ အဓိပ္ပာယ်မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကို မှန်ကန်စွာ မသိဘူးဆိုရင်တော့ ပြဿနာတွေကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ၊ သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမဟုတ်ရင် မှန်ကန်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလည်း ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ အောင်မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ထိရောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မန်နေဂျာ တွေသည် ပြဿနာတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းကိုင်တွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်း လမ်းတွေရှိပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ နည်းလမ်းတွေကို သိဖို့လိုသလို၊ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး ( Skills )လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေးဆိုတာ Soft Skill အမျိုးအစားတစ်ရပ်လို့ နားလည်မှတ်ယူကြပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူထားတဲ့ ( through education )၊ လေ့ကျင့် ခံထားရတဲ့( training ) ကလာတဲ့အမာစား ( Hard Skills ) အမျိုးအစားဖက်ကို မရောက်ပါဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အားသာချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပါရမီနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ပိုကဲပါတယ်။ လုံးဝလေ့ကျင့် သင်ကြားလို့ မရဘူးလို့ မဆိုပါ။ Soft skill ဖက်ကိုအလေးသာတယ်လို့ပဲဆိုလိုချင်တာပါ။
မည်သို့ဆိုပါစေ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ထိရောက်တဲ့ မန်နေဂျာများ၊ ခေါင်းဆောင်များကတော့ ပြဿနာတွေကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အပြင် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်။ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလည်းရှိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို မှန်ကန်စွာသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ လောကအလယ်မှာ အလိမ်အညာတွေ၊ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေကို ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တဲ့ အမြင်မှန်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေမှန်ကို ပကတိအရှိအတိုင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ သုံးသပ်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက် အလက်တွေကို ဘယ်လိုစုဆောင်းရမယ်ဆိုတာကို သိကြတယ်။ သတင်း အချက်အလက်အမှန်နဲ့ အမှားကို ခွဲခြားနိုင်ကြတယ်။ သုံးသပ်နိုင်ကြတယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာကို သိကြတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ရှာဖွေစဉ်းစား သုံးသပ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ အများနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့လိုက် ဆောင်ရွက်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ခေါင်းတစ်လုံး ဦးနှောက်တစ်ခုနဲ့ စဉ်းစားအဖြေရှာတာထက် လူအများ ဦးနှောက်အများနဲ့ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားအဖြေရှာတာက အကြံဉာဏ်ကောင်း နည်းလမ်းကောင်းတွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရှုထောင့်ပိုပြီးစုံနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့အတိမ်အနက်ကိုလည်း မှန်ကန်စွာချင့်တွက်နိုင်ကြပါတယ်။
ပြဿနာဆိုတာ ဖြေရှင်းရန်လိုသော ကိစ္စ။”အမေးပုစ္ဆာ” လို မြန်မာအဘိဓာန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ မြန် မာစကားပုံမှာတော့ “ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ”၊” ငှက်တစ်ကောင်မြားတစ်စင်း ”၊ “ အနာမသိ ဆေးမရှိ ”စသည်ဖြင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ “ အခြေအနေတစ်ရပ် ဟာ လိုအပ်သလိုမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ (သို့တည်းမဟုတ်) ဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ ပြဿနာဆိုတာရှိ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ”အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မျှော်မှန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ ရလဒ်များနှင့် တကယ့်လက်တွေ့ ရလိုက် တဲ့ ရလဒ်တွေကြား ကွာဟမှုဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ ပြဿနာပါ။ မျှော်မှန်းမထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အခက်အခဲတွေကြုံ တွေ့ရတာသည် ပြဿနာပါ။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အဲဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းလိုက်ဖို့ပါပဲ။ ( The best way to escape from problems is to solve them )
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ (သို့တည်းမဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်လာလတ္တံ့သော ပြဿနာတွေကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ ပြဿနာတွေ ကြီးထွားမလာဖို့ မန်နေဂျာများမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရရှိဖို့၊ မှန်ကန်စွာ စီးဆင်းဖို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ( Communication channels ) ကိုဖွင့်ထားပေးတာ။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် ( Empolyees’ Performance ) ကို အကဲခတ် သုံးသပ်တာ၊အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေ ( From past experience )၊လက်ရှိအစီအမံတွေ ( From present plans )ကနေ သွေဖီတာတွေရှိ၊ မရှိကို အမြဲဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန်နေဂျာတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပေးတဲ့ အခြေအနေလေးရပ်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုအထူးသတိပြုရမှာ၊ သတိရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အတိတ်က အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ သွေဖီလာတာ။ ( A deviation from past experience )
၂။ လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့ အစီအမံတွေကနေ သွေဖီလာတာ။ ( A deviation fromaset plan )
၃။ အခြားသူတွေက သင့်ကို ပြဿနာတွေ သတင်းပေးလာတာ။ ( other people communicate problems to you )
၄။ ပြိုင်ဖက်တွေသင့်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းအောင် အနှောင့်အယှက်ပြုလာတဲ့အခါ။ ( When competitors start to outperform your team or organization ).
ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေရှိပါတယ်။ ရှာဖို့ပဲလိုတာပါ။ သူဌေးကြီး ဟင်နရီဖို့ဒ် ( Henery Ford ) ကအခုလို ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနေတာဟာ အဖြေကိုသင်မတွေ့သေးလို့ပါ။ ( Impossible means that you havn’t foundasolution yet .)လိုချင်တဲ့ရလဒ်နဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကြားက ကွာဟမှုကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေတာသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် အဖြေသုံးရပ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ (၁)လက်ခံလိုက်ဖို့၊ (၂ )ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ဒါမှမဟုတ် (၃)စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို လက်ခံနိုင်ရင် လက်ခံ လိုက်ဖို့နဲ့ လက်မခံနိုင်ခဲ့ရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ရင်တော့ စွန့်လွှတ်လိုက်ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ အချို့သောဖြစ်သွားပြီးတဲ့ အရာတွေ အပေါ်မှာ ကိုယ်ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ရင် အချိန်ကုန်ခံပြီး စဉ်းစား မနေသင့်၊ ရှေ့ကိုဆက်ပြီး လျှောက်လှမ်းရမယ့် အရာတွေရှိနေပါတယ်။ ကျော်လွှားဖြတ်ကျော်ရမယ့် အရောတွေ ရှိနေပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲက Captain Jack Sparrow: က “ ပြဿနာဆိုတာ တကယ်တော့ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာအပေါ်မှာ ထားတဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်ထားကသာ ပြဿနာပါ “ တဲ့ ( The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. )
ပြဿနာရယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါ ပြဿနာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ အလုပ်ကနေစတင်ရ ပါ တယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းနိုင်သမျှ ရှင်းအောင်ပြဿနာကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိက ကျတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုမိရင် ပြဿနာဖြေရှင်းမှု ဖြစ်စဉ်ရဲ့အခြားအဆင့် တွေ အပေါ်မှာ ပုံပျက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ သက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာဖြေရှင်းမှုဖြစ်စဉ်( Problem Solving Process )မှာ-အဆင့်ငါးဆင့်ပါဝင်ပါတယ်။
(၁) ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း ( ဝါ )အသိအမှတ်ပြုခြင်း။ ( Identifying the problem )
(၂) အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုခြင်း။ ( Defining the problem )
(၃) ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးစုံကြံဆခြင်း။ ( Generating Alternative Solutions )
( ၄ ) ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုခြင်း၊ ( Making the decision )
(၅) ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ( Implementing and following up )
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အမြဲသတိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်စိကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ထားမှသာလျှင်၊ အရာရာမှာ သတိရှိနေမှသာလျှင် ပြဿနာကို စောစီးစွာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာရှိလာပြီဆိုရင်တော့ ပြဿနာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြဿနာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ပြီး ရှင်းနိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့အဖြေသည် သိသာထင်ရှားနေသော်မှ ပြဿနာကို ကောင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြည့်ပြည့်ဝဝသုံးသပ်မှုမပြုရင် အကျိုးကျေးဇူးပိုများတဲ့ ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ ဖြေရှင်းချက်တွေ လက်လွတ်သွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ခဲ့သွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေ ကို အခြေအနေပေးရင် ပေးသလောက်ရနိုင်သမျှများများစုဆောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပါဝင်သူအားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ မရှင်းလင်းတဲ့ အချက်တွေ၊ ပြဿနာရဲ့ ရှုထောင့်တွေကို ရှင်းလင်း သေချာအောင် မေးမြန်းရပါမယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အမေးကို မမေးနိုင်သေးသရွေ့ပြဿနာရဲ အဖြေကိုရမှာ မဟုတ်ပါ။
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုကြံဆရာမှာ အချက်အလက် ( data )မပါဘဲ ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုကို ရှောင်ရှားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပြီး ဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းများသည် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်နဲ့ ညီညွတ်ရဲ့ လားဆိုတာကိုလည်း သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေတို ဖြေရှင်းမှု ရေရှည် ဖြေရှင်းမှုလားဆိုတာကိုလည်းသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးစုံကို စဉ်းစားကြံဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီ။ ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းစုံကို ကြံဆပြီးပြီဆိုရင်တော့ အစွဲကင်းကင်း အဂတိကင်းကင်းနဲ့ အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ် ( Action Plan )ပူးတွဲပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်။ ဘယ်တော့ဆောင်ရွက်မယ်။ ဘာတွေဆောင်ရွက်မယ်။ ဘယ်သူတွေက ဆောင်ရွက်ပေးမယ် စသည်ဖြင့် စနစ်တကျသတင်းပေး ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန်နေဂျာတစ်ဦးအနေနဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီးယုံနဲ့ ပြီးပြီလားဆို မပြီးသေးပါဘူး။ အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကို တိုင်းတာဖို့၊တိုးတက်မှုရှိမရှိ စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ဖို့၊ လိုအပ်ရင် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူမှန်သမျှကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေ ထားတတ်ဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝဆိုတာ ပြဿနာတွေ ကို ဖြေရှင်းရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ ခရီးရှည်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ပျော်ရွှင်စရာ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြဿနာတွေကင်းဝေးပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။ ။
၄။ ပြိုင်ဖက်တွေသင့်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းအောင် အနှောင့်အယှက်ပြုလာတဲ့အခါ။ ( When competitors start to outperform your team or organization )." data-share-imageurl="">